पाथिभरा माताले हामीसबैको रक्षा गरुन, आज – ०८ साउन २०७८ शुक्रवारको राशिफल पढौं – OnlinePahar
मीन (दि, दु, थ, झ, ञ, दे, दो, चा, चि) महत्त्वपूर्ण अवसर गुम्न सक्नेछ । प्रेममा बाधाका साथै मन कमजोर रहनेछ । आर्थिक सङ्कटले गर्दा मनमा अशान्ति र छटपटी व्याप्त हुनसक्छ । राशिफल जे जस्तो भएपनि तपाईंको दिन शुभ रहोस् ।
← अपरिचित नम्बरबाट राष्ट्र बैंकसहित १५ वटा बैंकको सिस्टम ह्याक गरी पैसा चोर्ने चेतावनी !
आइपिओ निष्काशन गरेका तीन कम्पनीको शेयर सूचीकरणमा ढिलाइ किन? यस्ता छन् कारण →
२८ माघ २०७७, बुधबार ०८:०२ Basanta Khanal	0